Famatsian’ny Jirama :: Mikononkonona fitokonana ireo faritra sahirana amin’ny tsy fahazoana rano • AoRaha
Famatsian’ny Jirama Mikononkonona fitokonana ireo faritra sahirana amin’ny tsy fahazoana rano
Tsy voavaha. Mbola tsy hita taratra any an’ireo faritra sasany ny vahaolana amin’ny fahazoana rano avy amin’ny orinasa Jirama. Mitohy ny fijalian’izy ireo indrindra ny eny amin’ny faritra avo, toy ny eny Faravohitra, Tsarahonenana, Itaosy sy ny manodidina. Betsaka no nivoaka tamin’ny fahanginana vokatr’izany, ka tao no nanao fitokonana nidina an-dalambe. Fantatra fa hanamafy ny hetsika fitokonana ny mponina, etsy Faravohitra ary hanatevin-daharana azy ireo ny fokontany manodidina iharan’ny fahatapahan-drano.
« Rehefa tsy voavaly tao anatin’ilay fe-potoana nomenay ny fangatahanay dia hitohy indray ny fitakiana manomboka rahampitso (Ndrl : anio) mba hanairana ny Jirama sy izay tompon’andraikitry ny rano sy ny herinaratra. Misy fokontany maro no nilaza fa ho avy hanampy anay. Tsy misy resaka politika io fa tena fitakiana ara-dalàna », hoy ny solontenan’ny mponina, etsy Faravohitra.
Ho an’ny mponina eny Itaosy kosa dia voatery mitatitra rano avy any amin’ireo fokontany mahazo rano. An-kilany, nilaza ny hametraka siniben-drano, etsy Faravohitra, ny avy ao amin’ny minisiteran’ny Angovo, ny fano sy ny akoran’afo hamahana vonjimaika ny olan’ny famatsiana eny an-toerana. Tafiditra ao anatin’ny maintany tanteraka isika izao ka mahatonga ny tsy fahampian-drano, hoy ny minisitra Andriamanga Vonjy.
Nitondra fanazavana ihany koa itsy farany manoloana ny tsy mbola maha tomombana ny famatsian-drano miainga avy amin’ny toby famokaran-drano vaovao naorina eny Amoronankona hamatsiana ny mponina amin’ny ilany atsinanan’Antananarivo.
« Tapa-bolana izay no efa nahavitan’ny fotodrafitrasa eny an-toerana saingy mbola tsy afaka misitraka ny rano fisotro madio ireo mponina mijaly rano noho ny olana teknika samihafa.
Misy fahaverezana rano maro ka lasa mitarazoka ny fanatsarana ny famatsiana rano. Efa miasa andro aman’alina ny ekipa rehetra hanarenana an’izany olana ara-teknika izany mba hahafahana mamatsy rano faran’izay haingana sy hanamaivanana ny olan’ny tsy fahazoana rano amin’ireo faritra hafa eto an-drenivohitra », araka ny fanampim-panazavana.
Dinika faharoa momba ny IEM :: Miezaka mandresy lahatra an’ireo mpamatsy vola ny Praiminisitra